Barattoonni Magaalaa Giincii fi naannawaashii karoora Maaster pilaanii Finfinnee balaaleeffatan. - OMN
Barattoonni Magaalaa Giincii fi naannawaashii karoora Maaster pilaanii Finfinnee balaaleeffatan.
OMN:Oduu Sadaasa 12,2015 Godina Shawaa lixaa aanaa Ginciitti, barattoonni mana barumsa sadarkaa 2ffaa Gincii, maastar pilaanii Finfinneerratti, mormii jabaa dhageesisaa ooluu isaanii himame.
Magaalaa Buraayyuutti qondaaltoonni Mootummaa lafa gatii xiqqaan qonnaan bultoota irraa saaman hanga kuma 20 tti gurgurataa jiran.
Marii Dargaggoota Oromoo biyya Jarman Magaalaa Nurenberg jiraatan waliin taasifame kutaa Xumuraa.
OMN: ODUU (ADO 3, 2018)
OMN Jul 11, 2018
OMN: MIL’UU TIBBANAA (ADOL 9, 2018)